Imibuzo ngaboKhozi FM | IOL Isolezwe
Imibuzo ngaboKhozi FM
Isolezwe / 27 August 2012, 3:28pm /
KUSHIYE imibuzo eminingi ukungabonakali kwabasakazi boKhozi FM emcimbini wamaSatma obuse-Eastern Cape, eMthatha ngoMgqibelo.
UNgizwe Mchunu noKhathide ‘Tshath’ugodo’ Ngobe bebengabonwa nangokhalo kulo mcimbi okuyinto engajwayelekile ngoba lezi zilomo zoKhozi FM azisali emcimbini wamaSatma.
Lo mcimbi ubuhlelwe ngenhloso yokudalula amagama amaciko aqokelwe emikhakheni eyehlukene. Ethintwa uNgizwe uvele wakhala ngokuthi abahlelelwanga izinto zokuhamba lokho okubenze bangasibona isidingo sokuya kulo mcimbi. “Ngokujwayelekile bayaye basithinte basazise uma kuzoba khona lo mcimbi bese beyasitshela ukuthi sizofinyelela kanjani kuwona kodwa kulokhu akubanga khona ukuxhumana,” kuchaza uNgizwe.
Kwenzeka lokhu nje ngisho nakuwona umcimbi izikhulumi eziningi ubungathi zisemkhankasweni wokuthi kugcine kuwine uSaba Mbixane osakaza kuMhlobo Wenene owaziwa ngokuba yimbangi enkulu kaNgizwe noTshatha uma sekuza emikhakheni ethinta ezemisakazo.
UNgizwe ufunge wagomela wathi uSaba usejwayele ukuthi izinto zivame ukumlungela kumaSatma kodwa lo nyaka owamanqamu. “Akukho zinyane lemvubu lingadliwa yizingwenya kucwebe iziziba,” kubhoka uNgizwe.
Ethintwa uTshatha uvele washo okuhluke kakhulu kulokho okubekwe nguzakwabo ethula naye uhlelo uSigiya ngeNgoma. Uthe bona bebelinde ukwaziswa yithimba le-marketing ngalo mcimbi. “Saziswa yibona uma kumele sisakazele ngaphandle. Njengoba bengasitshelanga lutho akukho ebesingakwenza,” kusho uTshatha othe usePitoli.
UMnuz Mu Ngcolosi oyiMarketing Manager yoKhozi FM uthe kukhona okungacacile ngendlela okwenzeka ngayo kumaSatma akulonyaka. “Ukuqokwa kwamaciko kuqale sekudlulelwe yisikhathi,” kusho uMu.
Uthe okunye abantu okuzomele bakuqonde wukuthi njengoba lo mcimbi usuthuthele e-Eastern Cape usuzosingathwa nguMhlobo Wenene kanti okwabo njengoKhozi FM kuzoba wukweseka lo msakazo njengoba ungomunye wemisakazo yakwaSABC.
“Vele kuyinto elindelekile ukuthi kugqame kakhulu uSaba Mbixane kunabasakazi bethu,” kuchaza uMu ozivumile izingqinamba ekuhlelweni kwalo mcimbi osuthuthelwe e-Eastern Cape.